पुष्प र श्रद्धा अभिनित कृष्ण लिला ट्रेलर सार्बजनिक, कस्तो लाग्यो पुष्पको फरक भूमिका ? - www.dthreeonline.com
पुष्प र श्रद्धा अभिनित कृष्ण लिला ट्रेलर सार्बजनिक, कस्तो लाग्यो पुष्पको फरक भूमिका ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र ०६, २०७७ समय: २०:५७:३२
ईटहरी/ अभिनेता पुष्प खड्का र अभिनेत्री श्रद्धा क्षेत्री अभिनित फिल्म ‘कृष्णलीला’को ट्रेलर सर्वाजनिक भएको छ । २७ चैत्रबाट प्रदर्शनमा आउने फिल्म लभ स्टोरी कथामा निर्माण भएको हो । ट्रेलरमा फिल्मका अधिकांश कलाकारलाई स्थान दिइएको छ ।
लकडाउन खुलेसँगै इलाम र झापाका सुन्दर लोकेशनमा छायाँकन भएको फिल्म दीपक वलीले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा पुष्प र श्रद्धासँगै बुद्धि तामाङ, रविन्द्र झा, नवीन रेग्मी, हिउँ वाला गौतम, भावना गुरुङ, आयुष गुरागाईँ लगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ । फिल्मको कथा लक्ष्मण सुवेदीले तयार पारेका हुन् । हेर्नुस ट्रेलर
DThree Online ईटहरी/ नेपाली साङ्गितिक श्रोताहरु माझ एक उज्वल भबिस्य बोकेको नव गायिकाको आगमन भएको छ, आयाला चापागाई । आफ्न...